version 0.3.2 – တချို့ကသေးငယ်တဲ့ပြင်ဆင်ခြင်း
သြဂုတ်လ 3, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 14 comments
ဒီဗားရှင်းကိုငါတို့သည်အချို့သောသူပိုပြီးအဓိကလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအလုပ်လုပ်နေစဉ်ကိုစုဝေးစေသောသူအချို့အသေးစားပြဿနာတွေအားလုံးကိုပြုပြင်ဖို့လာ. အဆိုပါအဓိကပြင်ဆင်ချက်အတိတ်တွင်ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်စေသောအဓိကအငြိမ်စာမျက်နှာ၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုသောသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်. အချို့ကွက်လပ်စာမျက်နှာများနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးကသေးငယ်ပြဿနာကိုလည်း fixed ခဲ့သည်. သင်ဖြူစာမျက်နှာများတွင်ကြုံတွေ့ရလျှင်, ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ပေးရန်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်စေပါလိမ့်မယ် (ကျေးဇူးပြုပြီး php4 မရှိ…).
ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် သူ Anthony သူတို့အားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်တင်ပြ Debugging ၌သူ၏အကူအညီတောင်းအဖြစ်ရုရှားကိုဤ site ကိုဘာသာပြန်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီတောင်း.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, လှူဒါန်းခဲ့ဘာသာပြန်ချက်, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin
သူ Anthony ကပြောပါတယ်
သြဂုတ်လ 4, 2009 တွင် 11:31 နံနက်
သြဂုတ်လ 4, 2009 တွင် 7:45 ညနေ
တစ်ဦးစာရေး update ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. It is reallyagreat plugin 🙂
Tomas Kapler ကပြောပါတယ်
သြဂုတ်လ 7, 2009 တွင် 3:37 ညနေ
သင့်ရဲ့ plugin ကိုတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်, အရာကိုယ့် automaticaly အဆင့်မြှင့်တင်မပေးနိုငျ. က ususal ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်၏?
သြဂုတ်လ 8, 2009 တွင် 12:14 နံနက်
ကျွန်တော်မသိပါဘူး, ကကြိုးစားခဲ့ဖူး… ဒါကြောင့်မည်မဟုတ်မလိုပါဖြစ်ပါသည်.
သင်မည်သည့် error message တစ်ခုရလုပ်ပါ?
သြဂုတ်လ 7, 2009 တွင် 11:39 ညနေ
ကိုယ့်ကာလအစဉ်အမြဲအသုံးပြုပြီမြန်မြန်နဲ့အကောင်းဆုံး automated ဘာသာပြန်ဆိုသူ (နှင့်မြင်ဘူး)
သြဂုတ်လ 8, 2009 တွင် 12:13 နံနက်
သြဂုတ်လ 13, 2009 တွင် 6:25 ညနေ
ကိုယ့်အတွက်တစ်ဦးသတင်းဆိုက်အောင်ကြိုးစား3ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏ transposh plugin ကိုဤစီမံကိန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဟန်.
ငါပြဿနာ Translate့Buttons အလုပ်မဖြစ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်အရာသည်ဤဖြစ် yould ? စမ်းသပ်ဆိုက်: http://www.brinvest.ch/wp/
သြဂုတ်လ 14, 2009 တွင် 12:33 နံနက်
အိုကေ, seems that the Theme is blocking the Edit function 🙁
သင်အတိအကျဘာလုပ်ကွက်မှ Edit ကို function ကိုထွက်ရှာတွေ့မှကူညီနိုင် ? ကိုယ့်အပေါ်ကိုသုံးတာပါဆောင်ပုဒ် http://www.brinvest.ch/wp/ ဖြစ် http://www.wp-themes.der-prinz.com/magazine/
သြဂုတ်လ 17, 2009 တွင် 12:55 နံနက်
ငါဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကယ်. ပိုမိုရှိဝစ်ဂျက်ကိုသုံးမယ့် function ကိုဖန်တီးရမယ်2sidebars တလျောက်နှင့်သာသုံးနိုင်သည် 1 ဝစ်ဂျက် plugin ကို ;(, အကြီးအ plugin ကိုအဘို့အ thx!!!
သြဂုတ်လ 23, 2009 တွင် 11:09 ညနေ
ဂရိတ် plugin ကို! တကယျတော့ * စမတ် ​​ plugin ကိုဖွင့်! 🙂
ကျနော်မှာအနည်းငယ်ဆောင်းပါး posted င် http://www.myatus.co.uk/2009/08/23/fancy-wordpress-translations ကအနည်းငယ်ပိုပြီးအသုံးပြုသူဖော်ရွေစေကာ WP Theme ကိုမှအချို့သောအသေးစားပြုပြင်မွမ်းမံအောင်ဘယ်လိုပေါ် / လျော့နည်းအာကာသစားသုံး — ဖြစ်ကောင်းဒီတစ်စုံတစ်ယောက်မှအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်.
လည်း, ကိုယ့်အကြောင်းလျှင်, ငါ plugin ကို admin ရသည့်အပိုဆောင်း option ကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်. ကောင်းစွာ, တကယ်တော့နှစ်ဦး:
ငါသတိပြုမိပါ၏ “no_translate” အမျိုးအစား (ငါလက်ရှိတွင်ကြောင်းသုံးပြီးင်). ဒါပေမယ့်က admin ရဲ့တစ်ပြင်ဆင်ရန်လယ်ပြင်၌ရှိသည်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ပိုမိုလွယ်ကူစေခြင်းငှါ, သင်ရိုးရိုးအတန်းအမည်များကို add နိုင်ပါတယ်ရှိရာ (၏ပုံစံ “.classname”) သို့မဟုတ်၏ ID (၏ပုံစံ “#ID ကို”). ဒါကြောင့်တစ်ဦးအာကာသ / ကော်မာကွဲကွာစာရင်းသို့မဟုတ် fancier တစ်ခုခုဖြစ်…
ထိုမှတ်ချက်တွင်, သင်အချို့သောဒြပ်စင်ထုတ်ပယ်နိုင်လျှင်လည်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်, ဆိုလိုသည်မှာ။, အကြားမယ့်ကိုမဆိုဘာသာပြန်ဆိုကြဘူး “” tags များ. ဒီအကြောင်းရင်း, သင်သည်ငါ၏ site ပေါ်တွင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, source code ထဲမှာပူးတွဲဖြစ်ပါတယ် or also gets translated. It's rather silly to havea"if then else" statement become "misschien dan anders" (in Dutch). The same goes for right-aligned text, ie Hebrew or Arabic.
စက်တင်ဘာလ 4, 2009 တွင် 11:23 ညနေ
ကျွန်မ Nothing2Hide အားဖြင့်ဂလိုဘယ် Translator Plugin ကို အသုံးပြု. ပေမယ့်ကျွန်မ Google အကောင့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါ အသုံးပြု. ရပ်တန့်ခဲ့ / ကရာနှင့်ချီတရာဖန်တီးခြင်းခဲ့ Webmaster Tools 404 error စာမျက်နှာများ. သင့်ရဲ့ plugin ကိုဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ် 404 အခြားဘာသာပြန်ဆိုသူ plugin ကိုတူ error စာမျက်နှာများ? အကယ်. မ, ထို့နောက်ငါကိုစတင်သုံးစွဲချင်!
စက်တင်ဘာလ 8, 2009 တွင် 10:26 နံနက်
ကိုယ့်ကြောင့်မပြဗားရှင်းအသစ်မှမှတ်ချက်ရေးသား. ကိုယ့်ထဲမှာသူ့ရဲ့များ Bug ပြောပြချင်. Wordtube Plugin ကိုနှင့်အသုံးပြုနိုင် Canot ( နောက်တဖန်မ Playlist ) Ng Galerie နှင့်လည်းသဟဇာတမ ( နောက်တဖန်မ Diashow ).
ငါသည်သင်တို့ကိုပြင်နိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်, ၎င်း၏တို့သည်ကြီးစွာသော plugin ကို !!
စက်တင်ဘာလ 13, 2009 တွင် 8:24 နံနက်
ငါကြည့်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြဿနာနှင့်အတူ site တစ်ခုမှအကြှနျုပျကိုရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်?
သြဂုတ်လ 23, 2009 တွင် 8:28 ညနေ
I wanted to make sure that I was not leaving outapotential international audience. ဥပမာအားဖြင့်, one of the forums I frequentalot belongs toaFrench company.